३५ अर्ब रुपैयाँको हेलमेट किन्न सक्छ मुलुकले, के हो ट्राफिक प्रहरीको स्वार्थ ? (भिडियोसहित) « Janata Samachar
३५ अर्ब रुपैयाँको हेलमेट किन्न सक्छ मुलुकले, के हो ट्राफिक प्रहरीको स्वार्थ ? (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : 22 May, 2019 1:20 pm
काठमाडौं । शाहीकालका मन्त्री डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले नियम लगाए, दुई पांग्रे साधनमा हेलमेट पनि दुईवटा । यसले ज्यानको सुरक्षा गर्छ भन्ने थियो । त्यतिखेरको राजनीतिक अवस्थामा सुरक्षा दृष्टिकोणले त्यो नियम ठीक थियो या बेठीक, तर नियम लागु हुन सकेन । यतिखेर फेरि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पत्रकार बोलाएर ठूलो हल्ला गरेको छः आइएसओ मान्यता प्राप्त हेलमेट लगाउनु पर्नेछ । मोटरसाइकलमा सवार हुने सबैले । यो हेलमेटको नियमले कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ र बढीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ विदेशिन पक्का छ । यो पैसाले हामी कति बाटो बनाउन सक्छौँ ? मोटरसाइकलको सट्टा गाडी किन्न परे कति कार, बस किन्न सक्छौँ ? चीनबाट जनै आयात गरेर लगाउने अनि भारतबाट ११ करोडको तरुल र सखर खण्ड किनेर माघे संक्रान्ति मनाउने हामीहरु अब आइसओ मान्यता प्राप्त हेलमेट किनेर अर्बौँ रुपैयाँ विदेश पठाउँदैछौँ । नयाँ ट्राफिक नियय सुरक्षाकवच हो या कमिसनको खेल ?
२५ करोड रुपैयाँले एक मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने देशमा हेलमेटमा मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँ सकाउने ? देशमा एउटा हेलमेट उद्योग होस्, सरकारले चलाओस् तब यस्ता नियम लागु गर्दा जनता, वाह सरकार भन्छन् । यहाँ त फगत विदेशी कम्पनीलाई पोस्न, नेपाली जनतालाई सोस्न अनि कमिसनको माहमा फस्न गरिएका यस्ता निर्णयले कसैको हित गर्छ जस्तो लाग्दैन । जुन देशको सडकमा कुलो, खाल्डो, पशुचौपाया, पसल हुन्छ, त्यहाँ हेलमेट लगाएका भरमा ज्यान जोगिन्छ ? मादक पदार्थसेवन अर्थात् मापसे, सिट बेल्ट अर्थात् सिबे आतंकपछि ट्राफिक प्रहरी हेलमेट आतंक मच्चाउँदैछ । जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम बाइलाइनको शृंखला हेर्नुहोस्ः